Ndị European Aviation Authority, na-arụ ọrụ imeghari ụkpụrụ nke European Aviation Authority (EASA) maka ụgbọ elu n'ozuzu na-anaghị egbochi ụgbọ mmiri na ụgbọ elu egwuregwu, ma na-eduzi ihe omume na EU EU na Brussels. [More ...]
Hasan Fehmi Pasha, onye Minista Nafia, na June 5, 1880 na History Taa, okporo ụzọ ụgbọ oloko nke ga-agafe Anatolia ma rute Baghdad n'ọdịnihu nke itinye ego na ọrụ Ottoman State na mmepe nke Ottoman State. [More ...]
TCDD 2 Mpaghara Directorate nke Kayaş (East) ọpụpụ ịkwa osisi, Lalahan (West) ọpụpụ, alingrịba ama sistemu sistem, Tender Result TC State Railways Management TCDD 2. Mpaghara chazụta Mpaghara. [More ...]
Mmelite nke ọkwa dị larịị nke Malatya-Diyarbakır Dịka Ntinye nke Mkpokọta Thelọ Ọrụ Rọpụtara Obodo Turkey TCDD 5th District TchaD (TCDD) nwere ọkwa ruru. [More ...]
Ruo ụtụtụ a, ụgbọ elu ebidola ebido ebido na ọdụ ụgbọ elu Milas-Bodrum. N’ụbọchị mbụ, a na-ahazi ụgbọ elu iri abụọ site n’ọdụ ụgbọ elu, ebe a na-ewere usoro niile megide ọrịa na-efe efe. Ọnwa abụọ n'ọdụ ụgbọ elu Milas-Bodrum nke ọdụ ụgbọelu TAV na-arụ [More ...]
Şlọ ụlọ ọrụ Eskişehir (ESO), nke mepere ngalaba ụlọ akụ mbụ ya na Eskişehir na Export Ebe E Si Nweta nke Turkey-Turkish Eximbank, afọ a enyerela ijeri dollar 5 na ntinye aka na mbupụ ọnwa ise mbụ nke Eskisehir. Eskisehir [More ...]
N’ikwekọ na usoro iwu na-ahụkarị na usoro ọgbụgba coronavirus, okirikiri nke Ministry of Internal Affairs nyere na March, nke emechiri ka emesịa, a ga-eburu dị ka “ọkara nke ndị njem akọwapụtara na ụgbọ njem ọha na eze”. [More ...]
Nkwado si n'okporo ụzọ ụgbọ mmiri bịakwutere Kızılay, onye kọwara na enwere nnukwu mbelata onyinye onyinye ọbara n'oge ọrịa Coronavirus tụgharịrị ọnọdụ akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze. N'ihi ntiwapụ nke nje corona, na Sivas, Turkey yana n'ofe ọbara [More ...]
Amalitere ịdebanye aha maka ịdebanye aha mbụ maka nkesa "Hungarian Vetch Mkpụrụ", nke a gụnyere na mmemme nkwado nke Ankara Metropolitan Obodo maka ndị ọrụ ugbo si n'isi obodo. Ngalaba Ọrụ urallọ Ọrụ Rural, iji zụlite ọrụ ugbo na ịzụ ụmụ anụmanụ na Isi obodo [More ...]
Onye Minista oru ugbo na oke ohia Bekir Pakdemirli kwuru na ndị ọkụ azụ azụ tuna na-acha anụnụ anụnụ bidoro ịchụ nta site na ịsị Vira Bismillah, na afọ a nwere ike ịchụ nta dị puku abụọ na puku iri atọ na 2. Site na ọkọlọtọ Turkey [More ...]
Onye na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na obodo mepere emepe Murat Kurum ekwupụtala na ha ga-elekwasị anya n'ije ije na-acha akwụkwọ ndụ na ụzọ ndị na-agba ndụ iji mee ka ikuku dị mma. Nkwado na ụzọ ịgba puku kilomita 150 nke ndị ọchịchị obodo mere ruo taa [More ...]
Onye Minista Azụmaahịa Ruhsar Pekcan emegheghachiri ọnụ ụzọ ụgbọ mmiri na-ebu ibu nke mba dị iche iche, nke mechiri emechi oge ụfọdụ n'ihi ụdị ọrịa coronavirus (Kovid-19) ọhụrụ, na-emeghe Iran na Iraq, karịsịa Habur na Gürbulak. [More ...]
Onye Minista ezinụlọ, Ọrụ na Ọrụ Ndị Ọrụ, Zehra Zümrüt Selçuk, kwuru na ha amụbaala ikike dị elu ruo 40 lira na enyemaka ụlọ maka owuwu na ndozi nke ezinụlọ ndị nọ ná mkpa. [More ...]
400gbọ elu ndị agha A400M, nke ndị Turkish Air Force Command na-arụ ọrụ, enwetala asambodo ikike mbugharị njem n'otu oge. AXNUMXM Ọgbọ Ọgbọ Ọgbọ Ọgbọ Ọgbọ njem nke ọhụrụ nke Airbus mepụtara [More ...]
Turkey nke mbụ "na - adịghị ọcha" nke dị na ụlọ ọrụ egwuregwu ahụ na-atụgharị gaa na ụlọ ọrụ mmepe egwuregwu. Ngalaba ahụ, site n'ike nke ọ na-enweta site na nkwado nke usoro dị iche iche na-enye, na-enweta egwuregwu ndị dị mkpa na mmezu akụnụba dị mkpa n'ụwa. Ulo oru na [More ...]
Ellitelọ ọrụ ntanetị mbụ nke Turkey na National Assembly Held Ikpeazụ İmece
Mgbakọ nlegharị anya nke ugwu mbụ nke obodo nke ala na mba Turkeymeememe nke ikpeazụ nke celọ ọrụ mmepụta ihe na teknụzụ, Mustafa Varank, Mịnịsta na-ahụ maka nchebe na Minister nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Hulusi Akar Fair. [More ...]
Na-anata akụkọ ziri ezi nke EIA maka ụlọ ọrụ ya na ụbọchị ndị gara aga, TOGG kwupụtara na ya natara Asambodo Inye Anya na todaylọ Ahịa taa. Ntụle Mmetụta Gburugburu Ebe obibi maka ụlọ ọrụ ahụ n'oge gara aga (EIA) na-akọ akụkọ dị mma iji tinye ụgbọ ala na Turkey [More ...]
RayHaber Ozi Ntanye 04.06.2020
A ga-ewere Ọrụ Mmezi Mmezi Ankaray Maka Mmezi Nrụkọ Ọrụ Ankaray 1 Ma Ndozi na Ndozigharị Maka Mgbazinye Mkpo ụgbọelu Wagon na Onye Ọkwọ ụgbọ mmiri Ankaray Enterprise Jurnal Bed Mmezi Ọrụ. [More ...]
Ọdụ Airportgbọelu Istanbul nke atọ na-eme na 18 June
Onye na-ahụ maka njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu, Turkey Hoteliers Association zutere njikwa. Covidien-19 bụ ọmụmaatụ nke ntiwapụ nke ụwa na Turkey na mgba megide mkwuputa Karaismailoğlu, "ọtụtụ njedebe nke afọ [More ...]
Kedu mgbe ụgbọ elu mba ụwa ga-amalite? Kedu mba a ga-emepere ụgbọ elu ahụ?
Newdị coronavirus ọhụụ (Kovid-19) wee nwee mmerụ na ọrịa mba na nnukwu mmezu nke ụwa ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ, iwu ọhụrụ nke Turkey na-etinye nzọụkwụ n'ime usoro nke ndụ. Usoro coronavirus kachasị [More ...]
A ga-ekpebisi ọnụnọ ụgbọ elu Aydın Denizli On Euro
Mgbe ọrịa coronavirus gasịrị, ngụkọta ọnụ maka nnukwu mmefu ego mbu malitere. General Directorate nke okporo ụzọ ejikọtara na Ministry of Transport na akụrụngwa ga-abụ na June 163 maka owuwu na arụmọrụ nke Aydın-Denizli kilomita 11 dị ogologo. [More ...]
Gọvanọ Yozgat Kadir Çakır mere nyocha na arụmọrụ nke ọdụ ụgbọ elu na mpaghara na Yerköy Construction Site nke Ankara-Yozgat-Sivas High Speed ​​Train Project. Gọvanọ Çakır, na arụ ọrụ ụgbọ elu a na-arụ n’obodo anyị [More ...]
Ọnụahịa efu na Istanbul Bayrampasa Bus Terminal!
N'ime usoro iwu ọhụụ, mgbe ebuliri mmachi njem nke obodo, ụmụ amaala sochiri ọdụ ụgbọ ala. N’igosi na ego ha akwụgogo na otu oche oche, onye na-ahụ maka ụgbọ ahụ chọtara ọgwụgwọ iji bulie ọnụ ahịa tiketi. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala [More ...]
Ejiri okporo uzo ugboala Hicaz Railway di ka ihe nketa ọdịbendị na Adana
Mịnịstrị nke Omenala na njem Dalịnụ, General Directorate of Cultural Heritage na Ngosi ihe mgbe ochie, Kọmitii Kọmitii nke Mgbakọ Adana Cultural Heritage Pres mkpebi Board banyere ndebanye aha nke ọwara ahụ n'obodo Adana Karaisalı Bucak nke Obodo Baghdad-Hicaz Railway Line. [More ...]
Mpaghara ebe akụkọ ihe mere eme nke ọdụ ụgbọ oloko Hicaz na Damaskọs raara afọ iri anọ na anọ
Ọchịchị Syria na-agbanwe mpaghara akụkọ ihe mere eme nke ọdụ ụgbọ oloko Hicaz, nke e wuru n'etiti Damaskọs na ngwụsị narị afọ nke 19, gaa n'ụlọ ọrụ onwe maka afọ iri anọ na anọ, ka ọ bụrụ ụlọ oriri na nkwari akụ na -eme ihe omume. Isi mmalite nke ọchịchị Syria, ụgbọ oloko akụkọ ihe mere eme na isi obodo Damaskọs [More ...]